Dive site Tulamben, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Diving
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Dive site Tulamben
Toerana Manitrika Tulamben, Diving
Toerana misitrika Tulamben, misitrika mankany Liberty
Fijerena tranonkala antsitrika Tulamben
Toerana misitrika maro hafa koa no misy eo akaikin'ny tanàna akaikin'ny anarany mitovy. Ny tombony lehibe ananan'izy ireo dia ny biby manan-karena anaty rano sy ny endrika mahafinaritra.
Tulamben dia bay eo akaikin'ny Selat Lombok. Misy onja mahery mikoriana mamakivaky azy. Misaotra an'ity onja ity, trondro, plankton, ary koa ny olitra ary ny spores an'ny mponina anaty rano maro no milomano ao anaty bay. Ka ny tontolo anaty rano dia samy hafa be eto.
Sambo nilentika "Liberty"
Ny Tulamben dia heverin'ny maro fa ny toerana fisitrihana manintona indrindra any Bali rehetra. Tulamben dia nanjary nalaza tamin'ny mpanamory sambatra noho ny sambo amerikana Liberty, sambo fitaterana tafika amerikana notarihan'ny sambo mpisitrika japoney tamin'ny 1942 tany akaikin'ny nosy Lombok.
Mpandrava roa no nanandrana nanintona ny sambo nankany amin'ny seranan'i Singaraja hanamboarana azy io. Saingy teo anelanelan'ny dia nanjary feno rano haingana ny tanànan'ny Liberty ary nanomboka nilentika ilay sambo. Vokatr'izany dia nalefa tany amin'ny morontsirak'i Tulamben ilay sambo, ary mbola mijanona mandraka androany. Soa ihany fa tsy nisy naratra ny ekipa iray. Ny entana rehetra dia voavonjy noho ny fanampian'ny mponina eo an-toerana.
Inona no hiandry any ambany
Ity tranonkala antsitrika ity dia mety indrindra ho an'ireo mpankafy sary makro anaty rano. Ireo mpiresaka amin'ny hazan-dranomasina mahafinaritra sy zavatra mahaliana dia mety mahita zavatra mahaliana maro koa eto. Ny Tulamben koa dia tsara indrindra ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo vaoavao satria avo lenta ny fiarovana azy.
Fasika mainty, vatokely goavambe, vato ary sombin-ka lava mihamafy no miparitaka eto amin'ny fanambanin'ny ranomasina sy eo amoron-dranomasina. Mety hahaliana ny soritry ny fipoahan'ny volkano. Ary koa, manoloana ny fiafaran'ny fasika mainty, ny polyp maro loko, trondro ary molotra dia manana endrika miavaka.
Mampiseho karazana trondro an-dranomasina 500 eo ho eo ireo toerana misitrika maromaro any an-toerana. Ny kely manjaka eo aminy.
Karazana lehibe monina ao amin'ny bay
Vatohara mainty sy miloko, malefaka sy mafy
Anemone sy spaonjy
Karazan-crustacea isan-karazany - toрaby, patsabe ary crayfish
Trondro Harlequin, na matoatoa
Ny barрAry aiza no
Andiana tuna sy kaody
Mola Mola, na trondro tanamasoandro.
Mampiavaka ny tranokala antsitrika Tulamben
Lalina - hatramin'ny 40 m.
Ny antonony dia maoderina sy osa.
Ny hafanan'ny rano - manomboka amin'ny +22 ka hatramin'ny +30.
Avy amin'ny morontsiraka ny ankamaroany, fa azo atao koa amin'ny sambo.
Vanim-potoana - mandavantaona
adiresy: Tulamben, Kubu, Karangasem
Misitrika 2 miaraka amin'ny fanofana fitaovana - 1 200 000 - 1 350 000 ropia
Alatsinainy - 7.00 - 19.00
Talata - 7.00 - 19.00
Alarobia - 7.00 - 19.00
Alakamisy - 7.00 - 19.00
Zoma - 7.00 - 19.00
Sabotsy - 7.00 - 19.00
Alahady - 7.00 - 19.00
Mponina anaty rano amoron-dranomasina Tulamben
Tulamben Liberty Beach
Dive site Tulamben on the map
Mandroroa tranokala tulamben amin'ny sari-tany